Multivitamin: ဘာလဲ။ အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ ဘယ်လိုယူမလဲ
အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခြင်း: ဘာလဲ ဘယ်လို overtrain မ? ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။ ဘာစားရမလဲ
ဂျပန်အစားအစာ - ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါသလား။ ဒီအမြန်ကိုယ်အလေးချိန်နည်းလမ်းအကြောင်းကိုအားလုံးလေ့လာပါ!
ကျန်းမာခြင်း	 1 ဒီဇင်ဘာလ 2018
Multivitamin: ဘာအတွက်လဲ။ ဘယ်လိုယူမလဲ ဒီဟာကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကျန်းမာစွာနေနိုင်ရန်အာဟာရများလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လိုအပ်သောဤအာဟာရဓာတ်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှတသောအစားအစာများဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၎င်းတို့ကိုရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် multivitamins များအသုံးပြုခြင်းသည် ပို၍ တိုးများလာသည်။
သင်သည် multivitamin အကြောင်းအနည်းငယ်သိလိုလျှင်ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေပြီးသင်၏မေးခွန်းအားလုံးကိုမေးပါ။
Multivitamins လို့လည်းလူသိများတဲ့ Multivitamins တွေဟာငါတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင်များ၏ရှုပ်ထွေးသောအရာများဖြစ်ပြီးအစားအစာသည်အာဟာရလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်အခါအာဟာရပြည့်ဝသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
များစွာသောလူတို့ထင်သောအရာနှင့်မတူဘဲ multivitamin သည်သက်သေပြနိုင်သည့်ဗီတာမင်များကိုထောက်ပံ့ပေးရုံသာမကခွန်အားမြင့်မားသောကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးလူ၏ဘ ၀ အရည်အသွေးတိုးတက်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် multivitamins များသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်လိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များအတွက်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ထုတ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်အဟာရမတူသောကြောင့်မကြာခဏမစားသုံးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်သည်ဓာတ်သတ္တု ၁၅ ခုထက်ပိုသောလိုအပ်သောအရာများဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့အားသင့်လျော်သောအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ဖြင့်သဘာဝအလျောက်ဝယ်ယူရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အဓိကအားဖြင့်သံ၊ ခရိုမီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ကြေးနီ၊ အိုင်အိုဒင်း၊ ဆယ်လီနီယမ်၊ သွပ်၊ မန်းဂနိစ်နှင့်အခြားပစ္စည်းများသည်အမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်အမြင်အာရုံ၊ အရေပြား၊ သွားနှင့်လက်သည်းများကိုကောင်းမွန်စေသည် ဗီတာမင် A;
catabolism နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်သော cortisol ဟော်မုန်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊
အထူးသဖြင့်ဗီတာမင်အေနှင့်ခန်ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်ဆဲလ်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်း D ဆဲလ်အသစ်များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်;
ဇီဝြဖစ်ပျက်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းဖြင့်၎င်းမှဗီတာမင်များပါ ၀ င်သည် ရှုပ်ထွေးသော B.
ယေဘုယျအားဖြင့် multivitamins ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ သို့သော် multivitamin ကိုအကောင်းဆုံးရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောအကြံပြုချက်မှာ၎င်းကိုနေ့စဉ်အတူတကွအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆီတစ်မျိုးဖြစ်သောအဆီအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဗီတာမင်များဖြစ်သောကြောင့် A, D, E နှင့် K သည်အထူးသဖြင့်ဤအာဟာရဓာတ်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီးအစာအိမ်မှဖြစ်ပေါ်သောမတော်တဆမှုများသည်အစားအသောက်များကိုအစာကြေစေပြီး multivitamins များရှိအခြားအာဟာရဓာတ်များပြိုကွဲခြင်းနှင့်စုပ်ယူခြင်းကိုအားပေးသည်။
ဥနှင့် oatmeal တစ်ခုလုံးနှင့်အတူ Omelet ။
သို့သော်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး နှင့်တိုင်ပင်ရန်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်သူသည်သင့်အားအကျိုးကျေးဇူးများပိုမိုများပြားလာစေရန်ဤဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှုကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်သင့်အားပြောပြနိုင်သည်။
O lavitan စျေးကွက်တွင် ၁၀ နှစ်ကျော်နေထိုင်ပြီး၎င်းသည်တိုင်းပြည်အတွင်းအသုံးအများဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Lavitan သည်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် multivitamin ကိုပေးစွမ်းသည်။ ယနေ့တွင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်သည့်အာဟာရများပါ ၀ င်သည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုအမြဲတမ်းရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ယနေ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
multivitamins များလာတဲ့နောက် ဦး ဆောင်နေတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကဒီပစ္စည်းပဲ Centrumခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဗီတာမင်နှင့်ဓာတ်သတ္တုအပြည့်အစုံရှိသည်။
ငါဘယ် multivitamin ကိုရွေးချယ်သင့်သလဲ။
Lavitan နှင့် Centrum နှစ်မျိုးလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော multivitamins များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုခုသည်သင့်အားမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုသင့်အားကူညီပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသံသယဝင်လျှင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည့်သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အရိုးနာကျင်မှုလက်ဖက်ရည် - အမှန်တရားလားမှားယွင်းမှုလား။ ဒါကတကယ်သင့်ကိုတကယ်ကူညီပေးနိုင်မလားဆိုတာရှာဖွေပါ။